မနီးမဝေးတောင်အာဖရိက၏ကမ်းရိုးတန်းမှတည်ရှိသည် ဒါဂတ်စကာကျွန်း သည်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအားဖြင့် lapped ။ တိုင်းပြည်က၎င်း၏ကြွယ်ဝသောသဘာဝ, စိတ်ဝင်စားဖွယ်သမိုင်း, အံ့ဖွယ်၏ရှေ့မှောက်တွင်အဘို့အကျော်ကြား ဆွဲဆောင်မှု ။ ပြည်နယ်များ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှရသောနက်ရှိုင်းသောမြစ်များစီးဆင်းဒါဂတ်စကာကျွန်း, တွင်။
Betsiboka မြစ် လမျးညှနျခကျွန်း၏မြောက်ဘက်-အနောက်ဘက်၌ထားသည်အဘယ်မှာရှိ။ မြစ်၏စုစုပေါင်းအရှည် 525 ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။ အနီရောင်အညို - ကတစ်မူထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်ရေအရောင်ဖြစ်စဉ်းစားသည်။ မြစ်၏စီးဆင်းမှု၏ဧရိယာထဲမှာအားလုံးနီးပါးသစ်တောပျက်စီးသောကွောငျ့သိပ္ပံပညာရှင်များ, ဒီဖြစ်စဉ်ဂေဟစနစ်ဘေးဥပဒ်ကိုရှင်းပြပါနှင့်ခိုင်ခံ့သောမြေဆီလွှာတိုက်စားမှုလည်းမရှိ။ Betsiboka မြစ် - ဒါဂတ်စကာ၏သွားလာမှုမြစ်တစျခု, ဒါပေမယ့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းရေမျက်နှာပြင်များအတွက်သင့်လျော်သောသင်္ဘောများ၏လှုပ်ရှားမှုကို 130 ကီလိုမီတာသို့လျှော့ချခဲ့ရသည်။
Mangoki မြစ်တိုင်းပြည်၏တောင်ဘက်-အနောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ အလျား 564 ကီလိုမီတာအထိရောက်ရှိအဖြစ်ကဒါဂတ်စကာ၏အရှည်ဆုံးမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Mangoki ၏ပြည်နယ်မှအစပြု Fianarantsoa နှင့်၎င်း၏ရေပိုင်နက်အတွင်း Toliara ကြီးမားတဲ့မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဖွဲ့စည်းသည်မိုဇမ်ဘစ် Channel ကိုသို့စီးဆင်းရာ။ မြစ်၎င်း၏စီးဆင်းမှုအတားအဆီးကျွန်းများပေါ်ပေါက်၏ညှနျကွားထဲမှာတစ်ဦးဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသမှာကမ်းခြေနှင့်သိပ်သည်းဒီရေတောများတစ်လျှောက်တွင်တောတည်ရှိသည်။
ကျွန်း Maningory မြစ်တစ်မြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်၏အရှေ့ဘက်၌, အရာ၏အရှည် 260 ကီလိုမီတာထက်မပိုပါဘူး။ ဒါဟာရေကန် Alaotra ရေကန်ကနေအောက်ပါအတိုင်းနှင့်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာသို့ empties ။ Maningory မြစ်သည်အခြားအစာရှောင်ခြင်း-စီးဆင်းနေသောမြစ်ချောင်းနှင့်မြောက်မြားစွာ Rapids ကနေကွဲပြားနေသည်။ ရေလှောင်ကန်တုံ၏စုစုပေါင်းဧရိယာ 12.645 စတုရန်းမီတာနှင့်ညီမျှသည်။ ကီလိုမီတာ။
ခရီးသွားဧည့်ဖို့ဆွဲဆောင်မှုမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည် Tsiribihina ဒါဂတ်စကာ၏အနောက်ဘက်မှတည်ရှိသည်။ ကအေးဆေးတည်ငြိမ်နှင့်နှေးကွေးသောစီးဆင်းမှုမတူတစ်လျှောက်လုံး။ ဒါကြောင့်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးများနှင့်အတူနေထိုင်သူများများကိုဝေးလံသောပြည်နယ်များသို့လင့်ထားသည်ရန်ခွင့်ပြုသည်ကြောင့်ကြီးစွာသောအရေးပါမှုသည်။ ဖွဲ့စည်း Maningory မြစ်မြစ် cruises အဆိုအရ, သငျသညျဒေသခံအလှတရားကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်မြစ်တစ်ခုဖြစ်သည် အဆိုပါအမျိုးသားဥယျာဉ် Tsingy က de Bemaraha တင်းကျပ် Nature Reserve ။
မောရစ်ရှ - Beach
နမီးဘီးယား - စိတ်ဝင်စားဖို့အချက်အလက်
နမီးဘီးယား - ဆွဲဆောင်မှုများ
အီသီယိုးပီး - ဟိုတယ်
နမီးဘီးယားမှာရှိတဲ့ Safari က
နမီးဘီးယား - ကာကွယ်ဆေးထိုး
တာ့ရှ် - အထူးသဖြင့်ဥယျာဉ်တော်၌အသုံးပြုနိုင်သည်အပင်များအတွက်တန်ဖိုးများ,
ကလေးများအတွက် laryngitis ၏ကုသမှု
Maxi စကတ် 2015
Lymphadenopathy - လက္ခဏာများ
တစ်ဦး plasticine မြင်းအောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
Meghan Markle အမျိုးသမီးအဝတ်အစား၏၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စုစည်းတင်ပြ
မိသားစုဆရာဝန် - ကျွမ်းကျင်သောအကူအညီနှငျ့အထွေထွေ Practitioner ထံမှကုထုံးအကြားခြားနားချက်?
အဝတ်အတွက် pastel အရောင်များ
Britney Spears ၏ဖခင်နေဆဲအဆိုတော်များ၏ဘဏ္ဍာရေးထိန်းချုပ်
မင်းသားတွမ် Hardy Esquire ၏ဇန်နဝါရီလပြဿနာများအတွက်အင်တာဗျူးပေးခဲ့တယ်